Ahoana ny fomba ataon’ny literatiora nentindrazana Nepaley hametraka marika eo amin’ny sehatra erantany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2020 15:55 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, Ελληνικά, Français, čeština , Esperanto , English
Na eo aza ny tantara manankarena ananany momba ny fanontàna boky, dia zara raha fantatry ny mpamaky erantany ny literatiora nentindrazan'ny ao Nepal. Nandritra ny taonjato faha-20, raha natombok'ilay Nepaley mpanoratra, Laxmi Prasad Devkota, ny fombam-panoratana sy fandikàna ho amin'ny teny anglisy, tsy nitohy naharitra ela io fironana io no sady tato anatin'ny taompolo roa na telo monja vao nanomboka nitombo tsikelikely ny isan'ireo boky nepaley nosoratana ho amin'ny teny anglisy. Na izany aza, araka ny ambaran'ny mpandika lahatsoratra sady mpikaroka, Mahesh Poudel, mbola tena an-jorombala be ny literatiora nepaley eo amin'ny sehatry ny fanontàna asa soratra mifantoka amin'ilay faritra, ary zara raha hita any anatin'ireo diary malaza sy amboara voafantina erantany. Maro be ireo asa fanontàna miandry fandikàna azy, ary tsy afa-bela amin'izany ireo boky nosoratana Nepaley mpanoratra malaza. Isan'ny tafiditra ao anatin'ireo fanamby goavana atrehana ny sandam-pandikàna sy ny tataon-ketra, hatramin'ny tsy fisian'ny fiarahana miasa eo amin'ireo trano mpanonta boky ao an-toerana sy any ivelany, raha ny nambaran'i Bhupendra Khadka, mpanonta.
Ny Novambra 2019, ny Global Literature in Libraries Initiatives (GLLI) ao Etazonia dia nampiantrano iray volana virtoaly ho an'ny literatiora nepaley hanehoana amin'izao tontolo izao ny literation nepaley. Ny Jona 2020, nanaovan'ny Global Voices antsafa tamin'ny alàlan'ny imailaka ny lehiben'ny famoahandahatsoratry ny GLLI, Karen Van Drie, mba hahafahana mahazo topimaso momba ny literatiora nepaley ao anatin'ny tontolon'ny asa soratra erantany.
Saingy misy marika roa mihoatra lavitra noho ny literatiora mampiseho fa afaka hihatsara ny toedraharaha. Sambany, sarimihetsika vahiny iray antsoina hoe Parasite, avy any Korea Atsimo, no voafidy ho sarimihetsika tsara indrindra ho an'ity taona ity tao amin'ny Oscar. Ary koa, mameno ny tahirim-botoatiny amin'ireo fantina avy amin'izao tontolo izao ny Netflix. Ary, ny marika fahatelo mahavelona fanantenana dia misy ireo trano vaovao mpanonta boky no manomboka mamoaka literatiora nadika.